Google Inoda Vashandi Vese Vanodzokera KuHofisi Kuti Vabaiswe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Google Inoda Vashandi Vese Vanodzokera KuHofisi Kuti Vabaiswe
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Google CEO Sundar Photosi
Google ndiyo yakazvimiririra yakazvimiririra kusvika pari zvino yekugadza COVID-19 yekudzivirira inofanirwa nevashandi vayo.
Chero ani anouya kuzoshanda kumisasa yeGoogle anozoda kubaiwa jekiseni.
Iyi bumbiro ichaendeswa muUS mumavhiki anotevera, uye nepasirese pashure.
Mutungamiri Joe Biden vakati chinodiwa chekudzivirira mushonga kuvashandi vehurumende yeUS "chiri kutariswa izvozvi."
Ikambani yeAmerica yekombiki yekombiki Google LLC yazivisa kuti vese vashandi vayo vanodzokera kumabasa pamakampasi avo vanofanirwa kutemerwa nhomba ye COVID-19.
Pakutanga kwedenda re COVID-19, Google yakatumira ruzhinji rwevashandi vayo vangangosvika zviuru zana nemakumi mana kumusha munaKurume apfuura kuti vanoshanda vari kure. Nekudaro izvozvi, makampasi eGoogle ari kuvhurwa, uye vashandi vachange vachidzokera kumahofisi, asi CHETE mushure mekunge vabaiwa jekiseni, CEO Sundar Photosi akaudza vashandi veGoogle muemail nhasi.
"Chero ani anouya kuzoshanda pamakampasi edu anozoda kubayiwa jekiseni," Photosi akanyora, achiwedzera kuti mutemo uyu uchaburitswa muUS mumavhiki anotevera, nepasirese pashure.
Vashandi vasingade kudzokera kune-munhu basa vachakwanisa kushanda kubva kumba kusvika Gumiguru, akaenderera mberi, uye kambani ichabvumidza vamwe vashandi kuti vashande zvakanyanya kubva kumba kusvika kupera kwegore.
Google ndiro rakakura kwazvo rakazvimiririra kusvika parizvino kuita inoculation yekumanikidza kune vashandi vayo, asi hurumende yose yeUS ingakurumidza kutevedzera.
Sarudzo yeGoogle inouya seMutungamiri weUS, Joe Biden, achifungidzira kupfura kwevashandi vese vehurumende.
Biden akaudza vatori venhau neChipiri kuti chinodiwa chekudzivirira hutachiona chevashandi vehurumende chiri "kutariswa izvozvi," uye nhepfenyuro nhepfenyuro dzinoratidza kuti chiziviso chemusoro wenyaya chinogona kuuya mangwanani eChina.
Vaviri Biden neGoogle zvinoita kunge vane simba rekubvunza vashandi vavo kuti vabatwe. Kuongororwa neDhipatimendi Rezvekutongwa kwakapedzisa svondo rino kuti masangano akazvimirira ega pamwe nehurumende anogona kuraira vashandi kuti vabaiwe jekiseni.
Google, zvakadaro, ine mahofisi munyika makumi mashanu pasirese, uye zvinetswa zvemutemo zvinopesana nemvumo yekudzivirira zvinogona kuiswa mune dzimwe dzenzvimbo idzi. Email ya Photosi yakacherekedza kuti iro mvumo "richasiyana zvichienderana nemamiriro nemitemo," asi hapana zvimwe zvakapihwa.
Nguva pfupi mushure mekutaura kwa Photayi, Netflix yakazivisa kuti zvinoda kuti vese vatambi vanoshanda pazvigadzirwa zvavo muUS, uye vashandi vari padhuze navo, vabaiwe jekiseni.